Astaanta Boromiitiyos “Prometheus” - Land Of Punt
Giriigi hore, dabka way ka barakaysan jireen. Wakhti jaahiliga ee waxkasta dadka loogu sheekayn jiray ayaa aminsanaa in dabka samada ilaahyadu ka keenen si habeenkiina inta laysu yimaado ilaahyada loo caabudo. Waxay habeenki ku shidijireen goobaha ay yaalen asnaabtu si loo arko oo aan laysugu khaldin sanabyada la caabudayo. Waxaynu kaloo tarikhda giriiga ku haynaa sababaha dabka ay u qadarinjireen, ilaahyada buurta kujiray ee olombiyiinta ayaa jeclaa isboortiska iyo inay jidhkooda dhisaan, goobta laysugu imanayo waxaa dabka ka shidijiray ilaah dabka Boromiitiyos “Prometheus”.
Tariikhda Boromiitiyas markaynu soo koobno, Boromiitiyas wuxuu kamid ahaa ilaahyada cirka ku nool wuxuun ku hoos noola Zeus. Biniadamka oo iyagu degenaa dhulka ayaa ku noola mugdi oo aan haysan iftiin iyo dab ay wax ku shitaan. Boromiitiyas wuxuu ka xumaaday bini’aadamka ku nool mugdiga ee aan haysan dab ay waxku shitaan, iyo nolosha samada wada iftiinka ayuu isbarbardhigay Boromiitiyos. Go’aan ayuu qaatay ah inuu jabiyo xeerki hore ee ilaahyada uyaal ee ahaa inaan dunida dab la keenin. Boromiitiyos wuxuu ku talaabsaday arin cajiiba ah wuxuu si lama filaan ula haaday dabkii ka horshidnaa qasriga uu daganyahay ilaaha Zeus wuxuuna isku dayey inuu bini’aadamka (dunida) soo gaadhsiyo dab. Isla markiiba waa laga warhelay arinka boromiitiyos oo basaasintii ayaa soo sheegtay waana laga cadhooday ficilkaa iyo wadatashi la’aanta Boromiitiyos dabka ku qaatay waxaana lasoo gaadhsiyey ilaah Zeus.
Zeus ayaa markiiba wajigiisi isbadalay oo dhibsaday Boromiitiyos ficilkaa uu biniadamka ku caawinayo, warankiisi danabka ahaa ayuu haf layidhi oo ka dabatuuray boromiitiyos oo markaa cago dhigtay oo soo gaadhay dhulka. Boromiiyiyos danabkii ayaa ku dhacay oo curyaamiyey.
Dabka la shito ilaa ayaanka waxaa keenay ninkaa odayga ah ee Boromiitiyus oo isagu biniadamka ka naxay. Dabka sidii loohelay ilmo Adam waxay kutalaabsadeen horumar aan lasoo koobi Karin. Sidaa la ajligeed, waa inloo mahadcelinaya boromiitiyos oo la xusaa go’aanki geesinimada lahaa ee uu qaatay Boromiitiyus, sida loo xusayaana waa iyadoo maalin gaara loosameeyo oo laxuso. Dunida waxaa laga xusaa maalinta tooshka oo ah maalinta boromiitiyos. Maalinta waxaa loo qoondeeyey inay noqoto maalinta ka horeysa intaan ciyaaraha Olombigada la bilaabin ayaa lala ordaa toosh ama dab dunida lagusoo wareejinayo. Maalinta waxaa loogu talogalay in magca Boromiitiyus dhulka iyo samada laga maqlo. Waxaa kaloo lagu xusaa ilaaha Boromiitiyus oo astaan toosh ama dab lagumuujio lagana dhigtaa astaan waxku ool ah. Astaan tooshka Bormiiytiyos wuxuu ka turjumayaa nolol waarta iyo nuur jooga.
astaanta boromiitiyos ciyaar dabka isboortis mo farah olombiga olympic orod Prometheus